कात्तिक २४ गते कैलालीको लम्कीचुका–१ का भुपेन्द्र बडुवालको ह’त्या भयो । ह’त्या’रा पक्रा’उ परेलगत्तै भुपेन्द्रकी आमाले अभियुक्तलाई कडा कारबाहीको माग गरेकी छिन् ।
यो घटनाले अहिले कैलालीबासी निकै निराश छिन् । मृ,तककी आमा यो कुरा कतै सपाना जस्तो भैदियोस् भनेर कल्पना गरिहेकी छिन् ।
घरका एक्ला छोरा भुपेन्द्र बाहिर जस्तो भए पनि भित्र रुपमा असल भएको र दो’षीलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिनु पर्ने उनले बारम्बार भनिरहेकी छिन् ।
भारतमा पनि भेटियाे काेराेनाकाे नयाँ भेरियन्ट ‘ओमिक्राेन’- के छ नेपालको स्थिति?
दोस्रोपटक एमाले अध्यक्ष बनेका केपी शर्मा ओली को हुन् ?
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिप्रति सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसकै विरोध, प्रकाशमान सिंहले दिए यस्तो चेतावनी
यी बहादुर युवा जसले कुखुरा चोर्न आएको चितुवाको च्याप्पै घाँटी समाते